Siyaasiyiinta maamulka Somalilaan oo yaab la noqotey doodii xildhibaanada Ingiriiska - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Waxa suaalo badan la iska weydiiyay dood ku sheegii xildhibaano la yaqaano waxay aaminsan yihiin ay iskood ugu qabteen barlamaanka Ingiriiska. Siyaasiyiinta maamulka Somalilaan oo qudhoodu warba u ahayn sheekada ka socota Ingiriiska ayaa is weydiiyay cida so diratey kooxdan.
”Runtii anaga hadaan nahay beesha dhexe ictiraaf raadin wiyo sheeko noocaasa waxa nooigu dambeysay muddo toban sanno ku dhow xilligaas oo ISAAQ ugu yaraan wax wada raadin jirey hadda anagiibaa boqolkiiba 80 diidan gooni goosadka ayuu yidhi siyaasi ka tirsan xisbiga Kulmiye oo diiday inaan magaciisa sheego.
”Adeer Garxajis iyo Habarjeclo oo ISAAQA dhuuxoodi ah marhoraa ugu dambeysay ictiraaf waxa iyaga ugu daran sidii horjooge Muuse Biixi looga tuuri lahaa kursiga ayuu raaciyay.
”Waad u jeedaa marka sheekadu halkaa marayso hadda waa ISAAQII dhexdiisa waa ayo cida kale ee qurbaha noo joogta oo lacag ku bixinaysa in xildhibaanadaasi qabtaan dood noocaasa, ,idas kale sowtii Ingiriisku mowqifkiisa cadeeyay ee yidhi Muqdisho u raadsada ictiraafka ayuu ku dooday siyaasi kale oo isna ag-joogay oo ka tirsan xisbiga UCID.
Xildhibaanada ku jiray dooda ayaa u badnaa kuwa kjhaniisiinta u dooda, kuwa kaniisadaha iyo dadk agaalada u dooda, waxayna dalbadeen in la taageero gaalada is qarisa ee ku nool Hargeysa sida uu yidhi xildhibaan hadlay.
Si kastaba ha ahaatee waxa su’aalo badan ka taagmeen cida diratey ee hawshan ka dambeysa, waxana hubaala inayna ahayn kulan la isku yeedh yeedhay laakiin uu ahaa mid la soo diyaariyay in muddo ahna laga soo shaqeeyay.
Ninka isagu sheegtay inuu hormood ka yahay doodan ayaa shaqada looga eryay inuu sirtii Ingiriiska u gudbiyay wadamo kale. Waxa markale la eryay markii uu isku qalday laba ciyaar yahan oo madow kalana garan waayay meelaha ay kala joogaan iyo weliba waxbarashadii Ingiriiska oo khalkhal gashay intii uu joogay.